အနီကတ် မထိဖူးတဲ့ ကစားသမား (သို့) အသန့်ရှင်းဆုံး ကစားသမား (၇) ဦး
29 Nov 2017 . 4:42 PM
လူတိုင်းဟာ အမှားမကင်းကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီး ကစားရတဲ့ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာတော့ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့လည်း အမှားဆိုတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က အမှားမကျူးလွန်းပေမယ့်လည်း ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားကြောင့်လည်း ထုတ်ပယ်ခံရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် ဘောလုံးသမားတွေက ဘယ်တော့မှ အထုတ်ပယ်မခံရဘူးတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရာအူးလ် ဂွန်ဇာလက် (Raúl González)
စပိန်လက်ရွေးစင် ဂန္တဝင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး အူးလ် ဂွန်ဇာလက် (Raúl González) ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် (Real Madrid) ၊ ရှော်ကေး (Schalke) ၊ အယ်ဆက် (Al Sadd SC) နဲ့ နယူးယောက်ကော့စ်မို့စ် (New York Cosmos) အသင်းတွေမှာ ဖြတ်သန်းရင်း (၂၁) နှစ်ကျော်ကြာ ဘောလုံးကစားခဲ့ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ထုတ်ပယ်မခံရပါဘူး။ အနီကတ်ဆိုတာ သူမမြင်ဖူးတဲ့အရာပါ။
ရာအူးလ် ဂွန်ဇာလက် (Raúl González)
(၂) အမ်ဒရီ အင်နီယေစတာ (Andrés Iniesta)
ဘာစီလိုနာ အသင်းခေါင်းဆောင် အမ်ဒရီ အင်နီယေစတာ (Andrés Iniesta) ကလည်း အခုချိန်ထိ အနီကတ်မထိသေးတဲ့သူပါ။ ဘာစီလိုနာအသင်းကြီးနဲ့ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် (၁၅) နှစ်ကျော်ကြာအောင် ကစားနေပေမယ့် အခုချိန်ထိ အထုတ်မခံရသေးပါဘူး။ သူဟာ ကစားသမားဘဝမှ အနားမယူသေးတဲ့အတွက် အနီကတ်ထိသွားခဲ့ရင် ဒီစာရင်းမှာ ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမ်ဒရီ အင်နီယေစတာ (Andrés Iniesta)
(၃) ကာရင် ဘန်ဇီမာ (Karim Benzema)
တိုက်စစ်မှူး ကာရင် ဘန်ဇီမာ (Karim Benzema) ဟာ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာရော လက်ရှိ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပါ အနီကတ် မထိဖူးသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစာရင်းထဲမှာ ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘဝမှ အနားမယူသေးတဲ့အတွက် အနီကတ်ထိ၊ မထိဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး။
ကာရင် ဘန်ဇီမာ (Karim Benzema)
(၄) ဒါမီယန် ဒပ်ဖ် (Damien Duff)
အိုင်းရစ်နည်းပြ ဒါမီယန် ဒပ်ဖ် (Damien Duff) ဟာ ဘလက်ဘန်း၊ ချဲလ်ဆီး၊ နယူးကာဆယ်နဲ့ ဖူဟမ်အသင်းတွေနဲ့ အိုင်ယာလန်လက်ရွေးစင်မှာ (၁၉) နှစ်တာ ကျင်လည်ခဲ့ပေမယ့် အနီကတ်တစ်ခါမှ မထိဖူးပါဘူး။ ပြိုင်ဘက်တွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကစားတတ်ဖို့ ချီးကျူးစရာ ကောင်းတဲ့သူပါ။
ဒါမီယန် ဒပ်ဖ် (Damien Duff)
(၅) မီရှယ် ပလာတီနီ (Michel Platini)
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား (Ballon d’Or) ဆုကို ၃နှစ်ဆက်တိုက် ရရှိဖူးတဲ့ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်သမားဟောင်း မီရှယ် ပလာတီနီ (Michel Platini) ဟာ တစ်ခါမှ အနီကတ်မထိဖူးပါဘူး။ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းအပြင် နန်စီ (Nancy) ၊ စိန့်အီတင်း (AS Saint-Étienne) နဲ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းတွေမှာ (၁၅) နှစ်တာ ကစားခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါမှ ထုတ်ပယ်မခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
မီရှယ် ပလာတီနီ (Michel Platini)
(၆) ဂယ်ရီ လိုင်ကာ (Gary Lineker)
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းကြီး ဂယ်ရီ လိုင်ကာ (Gary Lineker) လည်း အနီကတ်မထိဖူးသေးပါဘူး။ လက်ရွေးစင်အသင်းအပြင် လက်စတာ၊ အဲဗာတန်၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ စပါးအသင်းတွေမှာ (၁၆) နှစ်တာ ကစားခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါမှ ထုတ်ပယ်မခံရဖူးတဲ့သူပါ။
ဂယ်ရီ လိုင်ကာ (Gary Lineker)
(၇) ဖိလစ် လမ်း (Philipp Lahm)
ဂျာမဏီအသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နောက်ခံလူကြီး ဖိလစ် လမ်း (Philipp Lahm) ဟာ အနီကတ်မထိဖူးတဲ့သူပါ။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ စတုဂတ်အသင်းတွေမှာ (၁၆) နှစ်ကျော်ကြာအောင် ကစားခဲ့ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ အထုတ်ပယ်မခံရဖူးပါဘူး။ အသန့်ရှင်းဆုံး ကစားသမားအနေနဲ့ အသင်းအတွက် စွမ်းဆောင်ရင်း ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ (၂ဝ) ရက်နေ့မှာ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
ဖိလစ် လမ်း (Philipp Lahm)
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက အနီကတ်မထိဖူးသေးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေပါပဲ။ ပေါ်တူဂီနဲ့ မိုနာကို ကွင်းလယ်သမား မော်တင်ဟို (Moutinho) ၊ အီတလီနဲ့ ဂျူဗင်တပ် ဂန္တဝင်နောက်ခံလူ ဂယ်တာနို ဆိုင်ရီးယား (Gaetano Scirea) ၊ ဂျာမဏီနဲ့ ဝါဒါဘရီမင် နောက်ခံလူဟောင်း မာကို ဘိုဒီ (Marco Bode) နဲ့ ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟောင်း မက်ဇိုင်း ဘော့စစ် (Maxime Bossis) တို့လည်း တစ်ခါမှ အနီကတ်မထိဖူးပါဘူး။
မိုနာကို ကွင်းလယ်သမား မော်တင်ဟို (Moutinho)
ကိုလံဘီယာ နောက်ခံလူဟောင်း ဂီရာဒို ဘီဒိုရာ (Gerardo Bedoya) ဟာ အနီကတ် (၄၆) ကတ် ၊ ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဆိုင်းရီရူးလ် (Cyril Rool) ဟာ အနီကတ် (၂၇) ကတ် နဲ့ နာမည်ကျော် နောက်ခံလူ ဆာဂျီယို ရာမို့စ် (Sergio Ramos) ကတော့ အနီကတ် (၂၃) ကတ်နဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
အနီကတ် ၂၃) ကြိမ် ထိဖူးတဲ့ ဆာဂျီယို ရာမို့စ် (Sergio Ramos)
ဝေးလ်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမား ရိုင်ယန် ဂစ် (Ryan Giggs) ဟာ မန်ယူအသင်းမှာ (၂၄) နှစ်ကြာ ကစားခဲ့ပြီး တစ်ခါမှ အနီကတ် မထိဖူးပေမယ့် ၂ဝဝ၁ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် နော်ဝေးအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ နှစ်ဝါတစ်နီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံရဖူးပါတယ်။
ရိုင်ယန် ဂစ် (Ryan Giggs)
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို (၅) ကြိမ်အထိ ရရှိထားတဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသား လီယွန်နယ် မက်ဆီ (Lionel Messi) ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ တစ်ခါမှ အနီကတ်မထိဖူးပါဘူး။ အနိုင်ရလိုစိတ် ပြင်းထန်ပေမယ့် ပြိုင်ဘက်တွေအပေါ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကစားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလပ်အသင်းမှာ အောင်မြင်မှုမြင့်မားသလောက် မက်ဆီဟာ အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ကံမကောင်းတတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂ဝဝ၅ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ဟန်ဂေရီအသင်းကို ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာပွဲဦးထွက်ပွဲမှာ လူစားဝင်ပြီး (၂) မိနစ်အကြာမှာပဲ တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ အထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
အနီကတျ မထိဖူးတဲ့ ကစားသမား (သို့) အသနျ့ရှငျးဆုံး ကစားသမား (၇) ဦး
လူတိုငျးဟာ အမှားမကငျးကွပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ခှနျအားကို အသုံးပွုပွီး ကစားရတဲ့ ဘောလုံးကှငျးထဲမှာတော့ မရညျရှယျဘဲနဲ့လညျး အမှားဆိုတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက အမှားမကြူးလှနျးပမေယျ့လညျး ကှငျးလယျဒိုငျရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြ အမှားကွောငျ့လညျး ထုတျပယျခံရတာမြိုး ရှိတတျပါတယျ။ အခုဖျောပွမယျ့ ဘောလုံးသမားတှကေ ဘယျတော့မှ အထုတျပယျမခံရဘူးတဲ့ ဘောလုံးသမားတှပေဲဖွဈပါတယျ။
(၁) ရာအူးလျ ဂှနျဇာလကျ (Raúl González)
စပိနျလကျရှေးစငျ ဂန်တဝငျတိုကျစဈမှူးဟောငျးကွီး အူးလျ ဂှနျဇာလကျ (Raúl González) ဟာ ရီးရဲလျမကျဒရဈ (Real Madrid) ၊ ရှျောကေး (Schalke) ၊ အယျဆကျ (Al Sadd SC) နဲ့ နယူးယောကျကော့ဈမို့ဈ (New York Cosmos) အသငျးတှမှော ဖွတျသနျးရငျး (၂၁) နှဈကြျောကွာ ဘောလုံးကစားခဲ့ပမေယျ့ ဘယျတော့မှ ထုတျပယျမခံရပါဘူး။ အနီကတျဆိုတာ သူမမွငျဖူးတဲ့အရာပါ။
ရာအူးလျ ဂှနျဇာလကျ (Raúl González)
(၂) အမျဒရီ အငျနီယစေတာ (Andrés Iniesta)
ဘာစီလိုနာ အသငျးခေါငျးဆောငျ အမျဒရီ အငျနီယစေတာ (Andrés Iniesta) ကလညျး အခုခြိနျထိ အနီကတျမထိသေးတဲ့သူပါ။ ဘာစီလိုနာအသငျးကွီးနဲ့ စပိနျလကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ (၁၅) နှဈကြျောကွာအောငျ ကစားနပေမေယျ့ အခုခြိနျထိ အထုတျမခံရသေးပါဘူး။ သူဟာ ကစားသမားဘဝမှ အနားမယူသေးတဲ့အတှကျ အနီကတျထိသှားခဲ့ရငျ ဒီစာရငျးမှာ ပါမှာမဟုတျပါဘူး။
အမျဒရီ အငျနီယစေတာ (Andrés Iniesta)
(၃) ကာရငျ ဘနျဇီမာ (Karim Benzema)
တိုကျစဈမှူး ကာရငျ ဘနျဇီမာ (Karim Benzema) ဟာ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးမှာရော လကျရှိ ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးမှာပါ အနီကတျ မထိဖူးသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီစာရငျးထဲမှာ ပါနတောဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝမှ အနားမယူသေးတဲ့အတှကျ အနီကတျထိ၊ မထိဆိုတာ မသခြောသေးပါဘူး။
ကာရငျ ဘနျဇီမာ (Karim Benzema)
(၄) ဒါမီယနျ ဒပျဖျ (Damien Duff)
အိုငျးရဈနညျးပွ ဒါမီယနျ ဒပျဖျ (Damien Duff) ဟာ ဘလကျဘနျး၊ ခြဲလျဆီး၊ နယူးကာဆယျနဲ့ ဖူဟမျအသငျးတှနေဲ့ အိုငျယာလနျလကျရှေးစငျမှာ (၁၉) နှဈတာ ကငျြလညျခဲ့ပမေယျ့ အနီကတျတဈခါမှ မထိဖူးပါဘူး။ ပွိုငျဘကျတှကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ကစားတတျဖို့ ခြီးကြူးစရာ ကောငျးတဲ့သူပါ။
ဒါမီယနျ ဒပျဖျ (Damien Duff)
(၅) မီရှယျ ပလာတီနီ (Michel Platini)
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမား (Ballon d’Or) ဆုကို ၃နှဈဆကျတိုကျ ရရှိဖူးတဲ့ ပွငျသဈကှငျးလယျသမားဟောငျး မီရှယျ ပလာတီနီ (Michel Platini) ဟာ တဈခါမှ အနီကတျမထိဖူးပါဘူး။ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးအပွငျ နနျစီ (Nancy) ၊ စိနျ့အီတငျး (AS Saint-Étienne) နဲ့ ဂြူဗငျတပျအသငျးတှမှော (၁၅) နှဈတာ ကစားခဲ့ပမေယျ့ တဈခါမှ ထုတျပယျမခံရတာဖွဈပါတယျ။
မီရှယျ ပလာတီနီ (Michel Platini)
(၆) ဂယျရီ လိုငျကာ (Gary Lineker)
အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျတိုကျစဈမှူးဟောငျးကွီး ဂယျရီ လိုငျကာ (Gary Lineker) လညျး အနီကတျမထိဖူးသေးပါဘူး။ လကျရှေးစငျအသငျးအပွငျ လကျစတာ၊ အဲဗာတနျ၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ စပါးအသငျးတှမှော (၁၆) နှဈတာ ကစားခဲ့ပမေယျ့ တဈခါမှ ထုတျပယျမခံရဖူးတဲ့သူပါ။
ဂယျရီ လိုငျကာ (Gary Lineker)
(၇) ဖိလဈ လမျး (Philipp Lahm)
ဂြာမဏီအသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျနောကျခံလူကွီး ဖိလဈ လမျး (Philipp Lahm) ဟာ အနီကတျမထိဖူးတဲ့သူပါ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့ စတုဂတျအသငျးတှမှော (၁၆) နှဈကြျောကွာအောငျ ကစားခဲ့ပမေယျ့ ဘယျတော့မှ အထုတျပယျမခံရဖူးပါဘူး။ အသနျ့ရှငျးဆုံး ကစားသမားအနနေဲ့ အသငျးအတှကျ စှမျးဆောငျရငျး ၂ဝ၁၇ခုနှဈ မတျလ (၂ဝ) ရကျနမှေ့ာ အနားယူခဲ့ပါတယျ။
ဖိလဈ လမျး (Philipp Lahm)
အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ အနီကတျမထိဖူးသေးတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှပေါပဲ။ ပျေါတူဂီနဲ့ မိုနာကို ကှငျးလယျသမား မျောတငျဟို (Moutinho) ၊ အီတလီနဲ့ ဂြူဗငျတပျ ဂန်တဝငျနောကျခံလူ ဂယျတာနို ဆိုငျရီးယား (Gaetano Scirea) ၊ ဂြာမဏီနဲ့ ဝါဒါဘရီမငျ နောကျခံလူဟောငျး မာကို ဘိုဒီ (Marco Bode) နဲ့ ပွငျသဈနောကျခံလူဟောငျး မကျဇိုငျး ဘော့စဈ (Maxime Bossis) တို့လညျး တဈခါမှ အနီကတျမထိဖူးပါဘူး။
မိုနာကို ကှငျးလယျသမား မျောတငျဟို (Moutinho)
ကိုလံဘီယာ နောကျခံလူဟောငျး ဂီရာဒို ဘီဒိုရာ (Gerardo Bedoya) ဟာ အနီကတျ (၄၆) ကတျ ၊ ပွငျသဈကှငျးလယျလူဟောငျး ဆိုငျးရီရူးလျ (Cyril Rool) ဟာ အနီကတျ (၂၇) ကတျ နဲ့ နာမညျကြျော နောကျခံလူ ဆာဂြီယို ရာမို့ဈ (Sergio Ramos) ကတော့ အနီကတျ (၂၃) ကတျနဲ့ အကွမျးတမျးဆုံးကစားသမားတှအေဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။
အနီကတျ ၂၃) ကွိမျ ထိဖူးတဲ့ ဆာဂြီယို ရာမို့ဈ (Sergio Ramos)
ဝေးလျအသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျကှငျးလယျကစားသမား ရိုငျယနျ ဂဈ (Ryan Giggs) ဟာ မနျယူအသငျးမှာ (၂၄) နှဈကွာ ကစားခဲ့ပွီး တဈခါမှ အနီကတျ မထိဖူးပမေယျ့ ၂ဝဝ၁ခုနှဈမှာ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ နျောဝေးအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျတဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ နှဈဝါတဈနီနဲ့ ထုတျပယျခံရဖူးပါတယျ။
ရိုငျယနျ ဂဈ (Ryan Giggs)
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားဆုကို (၅) ကွိမျအထိ ရရှိထားတဲ့ အာဂငျြတီးနားနိုငျငံသား လီယှနျနယျ မကျဆီ (Lionel Messi) ဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ တဈခါမှ အနီကတျမထိဖူးပါဘူး။ အနိုငျရလိုစိတျ ပွငျးထနျပမေယျ့ ပွိုငျဘကျတှအေပျေါ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ကစားတတျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလပျအသငျးမှာ အောငျမွငျမှုမွငျ့မားသလောကျ မကျဆီဟာ အာဂငျြတီးနားလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ကံမကောငျးတတျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ၂ဝဝ၅ခုနှဈ သွဂုတျလ (၁၇) ရကျနမှေ့ာ ဟနျဂရေီအသငျးကို ရငျဆိုငျကစားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့နိုငျငံတကာပှဲဦးထှကျပှဲမှာ လူစားဝငျပွီး (၂) မိနဈအကွာမှာပဲ တိုကျရိုကျအနီကတျနဲ့ အထုတျခံလိုကျရပါတယျ။
by Htet Htet .5hours ago
by Ju Jue .9hours ago
Adidas ဖိနပ်အစစ်နဲ့အတု ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားမလဲ
by Htet Htet . 10 hours ago
ဘီလျံနာအများဆုံး မွေးထုတ်ပေးတာ ဘယ်တက္ကသိုလ်လဲ
by Kyaw Soe Aung . 12 hours ago
ကင်မရာကို ဒီလိုလေး စနစ်တကျ သန့်စင်ကြည့်ပါ
by Htet Htet . 1 day ago
Six Pack တကယ်ရစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးများ